सेक्ससँग सम्बन्धित महत्त्वपूण प्रश्न र उत्तरहरु। - Varient - News Magazine
Jul 23, 2021 - 14:19
सेक्स संग सम्बन्धित धेरै प्रश्नहरु तपाईको दिमागमा आउँन सक्छ। जे होस् पुरुषहरू यसको बारेमा खुला रुपमा कुरा गर्छन् तर महिलाहरु हिचकिचाउँने गर्दछन्। विशेष गरी महिलाहरूसँग सम्बन्धित प्रश्नहरु उनिहरुले यौनसंग सम्बन्धित प्रश्नहरु सोध्दा, मानिसहरुले उनीहरुलाई गलत रुपमा सोच्छन कि भनेर महिलाहरु डराउँने गर्दछन। वास्तवमा सेक्ससँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको उत्तर थाहा पाउँदा, तपाई सेक्सको रमाइलो पनि लिन सक्नुहुन्छ। यहाँ केहि यस्तै प्रश्नहरू छन्। यी प्रश्नहरू जानेर, तपाईं आफ्नो यौन जीवनलाई अझ राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ।
१. के महिलाहरू सेक्सको समयमा ओर्गाज्ममा वा चरमसुखमा पुग्छन?
यदि महिलाहरुलाई सेक्स अघि राम्रो सँग फोरप्ले वा उनिहरुको यौन अंगहरु खेलाइएको वा चलाइएको छैन भने, उनीहरु सेक्स पछि चरमसुख प्राप्त गर्न सक्दैनन्। अधिकांश महिलाहरूमा यो समस्या हुन्छ। यस्तो अवस्थामा पुरुषहरूले यौन सम्बन्ध राख्नु अघि उनीहरूको महिला साथीसँग केही मायालु कुराकानी गर्नुपर्दछ ।
उत्तेजित पार्नको लागी उनिहरुको विशेष संवेदनशिल अंगहरू छुनु वा चलाउँनुपर्दछ जस्तै स्तन, घाटीँ, पिठ्यु, पाईताला, कान आदी। हामी तपाईलाइ भन्छौकि महिलाको लागी, यौन सम्बन्ध शारीरिक रुपमा भन्दा पनि मानसिक रुपमा बढी हुन्छ। जति धेरै तपाई उसलाई मानसिक रुपमा उत्तेजित गर्न सक्नुहुन्छ, महिलाहरुले त्यतिनै बढि मात्रामा सेक्सको आनन्द लिने छन्।
२.म धेरै छिटो स्खलित हुन्छु। के म मेरो बेडटाईम लाई बढाउन सक्छु?
यौन आनन्द लिनको लागि लामो समयसम्म यौन सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने आवश्यक छैन यौन आन्नद लिनको लागी केवल केहि क्षणहरू आवश्यक एवंम महत्वपुणर् हुन्छ। सेक्सको मजा लिनको लागी, तपाईंले पुण रुपमा बेडटाईम लाई भुल्नुपर्दछ। यदि तपाईं आफ्नो साथीसँग लामो समयसम्म ओछ्यानमा विशेष पलहरुको आनन्द लिन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं लामो समयसम्म फोरप्ले वा महिलाहरुको यौन अंगहरुलाई चलाउँन सक्नुहुन्छ। सेक्स थेरापिष्ट्स द्वारा गरिएको एक अध्ययन अनुसार, सेक्सको मजा लिन ३ देखि १३ मिनेट पर्याप्त हुन्छ। त्यसैले बेडटाईमको बारेमा वा ओछ्यानमा हुदाँ कहिल्यै प्रेसरको महसुस नगर्नुहोस्।
३.सेक्स सुरुवात कसरि गर्ने?
सामान्यतया, सेक्स सुरु गर्ने कुरा पुरुष साथीहरुमा भर पर्दछ। जबकि महिलाहरुले त्यसपछि मात्र समर्थन गर्दछन्। के पुरुषहरू सधैं अग्रसर हुनु वास्तवमै आवश्यक छ? पक्कै छैन। कुनै पनि पार्टनरले पुरुष वा महिलाले सेक्स शुरू गर्न सक्दछ। यदि तपाईं यौन सम्बन्धको बारेमा लजालु हुनुहुन्छ भने, तपाईंको पार्टनरलाई केहि उत्तेजक सन्देश पठाउनुहोस्। बिस्तारै, जब कुराहरु अगाडि बढ्न थाल्छन्, एक अर्काको नजिक हुनुहोस्। एक अर्कोसँग आमनेसामने रमाईलो सेक्सी कुरा गर्नुहोस्। यस तरीकाले, सेक्सको सुरुवात गर्नाले सेक्सको मजालाई दोब्बर पार्न सकिन्छ।
४.के निरन्तर सेक्सले महिलाहरुको योनी ढिल्ला वा खुकुलो हुन्छ?
समय बित्दै जाने क्रम मा केही महिलाहरुलाई यस्तो समस्या हुन सक्छ। तर प्रायजसो महिलाहरूको सन्दर्भमा यस्तो हुदैन। महिलाहरुले हरेक परिस्थितिमा सेक्सको आनन्द लिन सक्दछन्, बरू पुरुष पार्टनरले उनिहरुलाई पुण रुपमा उत्तेजित पार्न सक्षम हुनुपर्दछ।
५.के वास्तवमै पुरुषहरूको लिंगको आकार सेक्सको लागि महत्त्वपूणर् छ त?
यौन सम्पर्कको समयमा पुरुषको लिंगको आकारले केहि फरक पार्दैन। यदि महिला र पुरुष पार्टनर सेक्सको असलि मजा लिन जान्दछन भने लिंगको आकारको कुरा कहिले पनि आउँदैन।
६.के महिलाहरूलाई एनल सेक्स वा गुदा मा सेक्स गर्दा आन्नद आउँछ त?
केही महिलाहरूले एनल सेक्सको आनन्द लिन चाहन्छन भने केहि महिलाहरुले मन नपराउँन सक्दछन यस्तो कुरा महिलाहरुको रुचि र इच्छा अनुसार फरक पर्दछ। विभिन्न अध्ययनहरुले पुष्टि गरिसकेको छ कि असंख्य रुपमा महिलाहरूले एनल सेक्सको आनन्द लिइरहेका छन्। यद्यपि त्यस्ता धेरै महिलाहरू पनि छन् जसले एनल सेक्स गर्न अनिच्छुक हुन्छन्। वास्तवमा, प्राय जसो महिला र पुरुषहरू अझै पनि एनल सेक्स कसरि गर्ने भन्ने कुरा जान्दैनन्। यसका कुनै फाईदा वा बेफाइदा छन् वा छैनन भन्ने कारण थाहा नभएर पनि होला प्राय महिलाहरु एनल सेक्स गरेर मजा लिन सक्षम भएका छैनन्।
७.के संभोगको दौरानमा केटाले यौनस्खलन रोक्नु खतरनाक हुन्छ त?
यौन सम्पर्कको समयमा यौनस्खलन रोक्नु खतरनाक हुन्छ वा हुदैन भन्ने बारेमा अहिलेसम्म कुनै पनि वैज्ञानिक प्रमाण पत्ता लागेको छैन। यसको विपरित, पुरुषहरूले यस्तो माध्यमबाट धेरै समयसम्म सेक्सको आनन्द लिन सक्दछन्। यो विधि जसलाई समयपुर्व स्खलन हुने समस्या छ उनिहरूका लागि उपयोगी हुन्छ। यौनस्खलन बिच बिचमा रोक्दै तपाईहरुले आफ्नो पार्टनर र आफुलाई पुण रुपमा सेक्सको मजा दिलाउँन सक्नुहुन्छ।
८.पत्नीलाई सेक्स गर्नको लागी कसरी तयार पार्न सकिन्छ?
तपाईले नियमित सेक्सको समयमा नयाँ नयाँ प्रयोगहरू वा नयाँ आसनहरु प्रयोग गर्दा मात्र पत्नीले सेक्सको आनन्द लिन सक्दछ। कहिलेकाँही सेक्स पोजिसनहरुको स्थितिको कारण, महिलाहरुले यौन सम्र्पक को बारेमा उदासीन महसुस गर्छन्। त्यसैले यस्तो अवस्थामा, हरेक पटक सेक्स गर्दा नयाँ नयाँ आसन वा पोजिसनहरु मा सेक्स गर्नु जरुरि एवंम महत्वपुणर् हुन्छ।
यसले सेक्सको लागि महिलाहरुको चाहनालाई बढाउँदछ। यस तरिकाले महिला पार्टनरलाई र्टन अन गर्न सजिलो हुनेछ। महिलाहरुको मुड र्टन अन गर्न सेक्सी कुराहरु वा उनिहरुको यौन अंग चलाउँन फोरप्लेको मद्दत लिन सक्नुहुन्छ। जसले उनिहरुलाई सेक्सको अदभुत मजा लिन तयार गराउँदछ।
रक्तस्राव (Bleeding) कसरि रोक्न सकिन्छ ?